Nonstick Surface Teflon Fabric nokuda Printed Circuit Board gadzira - China Jiangsu KingRay hwoupenyu
Teflon Fabric, akagadzirwa teflon zvemapuranga negirazi jira iri Ukobvu 0.15mm, sezvo kusunungurwa bepa iri zvaAtemisi akadhindwa redunhu mapuranga
Chii PTFE Glass Cloth?
Teflon jira chakagadzirwa yepamusoro Washington City Offices, uye akaiswa mushonga wokuuraya mukuru-waivako PTFE mvura zvinhu, muchiitiko ichi, PTFE ichi Coated Washington City Offices jira ane mukana mukuru tembiricha kurwisa uye nonstick pemvura.
Specification pamusoro Telfon zvemapuranga jira
Mukana PTFE Fabric?
High kupisa kurwisa, chakanakisisa kusunungurwa pfuma panguva -70-360C dhigirii
Non rutanda pamusoro, chinhu inoomerera panyika iri nyore kuchenesa
Chemical ngura musimbwa
Ndeiya yakaita wakatsiga uye vakaderera kukweshera
Microwave uye UV nemishonga
FDA nad LFGB tendero, dzinogona kushandiswa muchoto liner, BBQ bonde
How kushandisa teflon papepa?
Sezvo resununguro pepa iri zvaAtemisi kusanduka redunhu akadhindwa bhodhi (FPC), Recommend 0.15mm
Rlease firimu nokuti Eva foni iri zuva indasitiri, yeMutemberi 0.25mm uye 0.35mm
Made kuti akakonzera kubatana kwe muchina bhandi inoshandiswa muhombodo chisimbiso, Recommend 0.13mm
Conveyor bhandi chiputiriso nedanho napkin bepa, Recommend 0.25mm
Sezvo muchoto liner, kubika liner nokuda bhekari, yeMutemberi 0.11mm, 0.13mm, 0.20mm
Made kupinda teflon mutsago kuti nguo yokudhinda, Recommend 0.11mm
Sei yedu Non-rutanda & Heat nemishonga PTFE Cloth anopfuura pamusika uyu?
Zvino isu tine 13 unhani michina, uye maawa 24 kumhanya, izvo zvinoita zvedu zvokunyama mutengo akaderedza zvizhinji.
Uye isu ukarukira dzimwe mhando simba Washington City Offices pachedu, nezvakanakisisa German kurukiswa Machine DORNIER, uye kutenga zvimwe mukuru-waivako regirazi faibha kubva Taiwan uye CPIC.
The PTFE zvinhu tiri kushandisa iri 100% kupinza Dupont & Dakin PTFE.
Uye ikozvino tiri kutengesa kunyika dzinopfuura 100 wedu PTFE Cloth.
Tine Full Mhando PTFE Coated Fabric, pamwe yemakwikwi mutengo uye yepamusoro zvigadzirwa.
PTFE Cloth , ukobvu kubvira 0.06mm kuti 1mm, aigona kuita munzvimbo Anti-kunofambira mberi, Porous, Smooth, Rough , uye kuti mukati Dark Brown, Light Brown, White, Black nevamwe colorized ruvara.
PTFE Tape , ukobvu kubvira 0.08mm kusvika 0.30mm, nezvakanakisisa Dow-corning Silicone namira.
PTFE Belt , kufanana Open Mesh mabhandi, PTFE Cloth mabhandi, Endless mabhandi, mabhandi pamwe Joint etc.
PTFE Mats & Liner zvokudya , kufanana BBQ Mat, muchoto Liner uye zvichingodaro.
Previous: PTFE zvemapuranga Washington City Offices jira kuti Leather laminating Machine
Next: Excellent Release Property Non Stick PTFE Coated Nemicheka
Teflon Laminator Release Washington City Offices Fabric